You na-etinye ego na Nkwado Ihe? | Martech Zone
You na-etinye ego na Nkwado Ihe?
Tọzdee, Septemba 20, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ikpeazụ ná ngwụsị izu m kpọrọ m na Atụmatụ saịtị na-na ha Edge nke ihe ngosi redio Web na ịgwa ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nkwukọrịta mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ ndị gbadatara site na IU Kokomo ịgwa anyị okwu. Ọ bụ ihe omume dị egwu ma ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ịnụ ọkụ n'obi wee jụọ ọtụtụ ajụjụ - ọ bụghị naanị maka mgbasa ozi ọhụụ mana gbasara azụmahịa n'ozuzu ya. Ọ bụ ihe agbamume na-enweghị atụ ịhụ ka ha si nwee obi ụtọ.
Mgbe m gara ihe omume ndị a, ana m agbalị mgbe ụfọdụ iweta ụfọdụ ụdị ihe nkwado. Oge a, ewetara m draịva 4Gb USB DK New Media mere site ePromos.
The nkwado USB draịva na-ozugbo kụrụ na mgbe a di na nwunye na ụmụ akwụkwọ hụrụ ha, M nwere ìgwè mmadụ nke ụmụ akwụkwọ gbara m gburugburu. Ndị mmadụ hụrụ ihe nkwado n'anya promotion ọkachasị mgbe ha bara uru. Dịka ọrịre ọ bụla, enwere ezigbo ego ejiri ya na ego emebiri. Ihe ntanye USB abụghị ihe dị ọnụ ala, ọkachasị mgbe ha bụ 4Gb :). Agbanyeghị, site na ịhapụ ihe nkwado bara uru, ọ na-enye echiche nke ịdị mma na ọdịiche anyị chọrọ ka ndị mmadụ na ụlọ ọrụ anyị na-akpakọrịta.
Ejila ihe nkwado. O nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nye atụmanya gị na ị bụ ụdị onye na-ere ahịa nke ga-akwụ ụgwọ ha!
Banyere ePromos: Edegharịala m ọzọ site na ePromos oge ole na ole ugbu a ma nwee ekele maka ọrụ ha na onyinye ha. A na-ebipụta draịva ndị ahụ nke ọma, gosipụtara n'oge na-akwakọba nke ọma, ma ha nwere nnukwu ego iji nwepu ego. Ihe ọzọ m nwere obi ụtọ na ePromos bụ na ha na-eziga ozi-e anyị "Oge Ntinye" ihe dị ka otu ọnwa mgbe ị nyesịrị ihe na mbelata ịghaghachi. Ọ bụ ezigbo ihe ncheta iji lelee ntinye nke ihe nkwado na ịnyeghachi mgbe ọ dị mkpa!
Tags: epromosihe nkwalite mmemmenkwaliteihe nkwadoswagwageriri draịva
e-agụ na ịrị elu
Ihe kpatara Walmart ji kwusi na Hyperlocal Social
Onyinye a kwadoro ga-ewulite ụwa dị iche maka ire dị ka ndị ahịa na-edebe ha ogologo oge gị karịa ịhapụ ha ma ọ bụ leghara ha anya dị ka mgbasa ozi ọzọ.